Kusukela lokho usuku kubhekwa sokukhulelwa gynecologists?
Uma owesifazane uyezwa esikhundleni sakhe esisha, enendawo imibuzo eminingi. Yiqiniso, uyayikhathalela indlela ingane ozokhula, uma zonke sithobela. Njalo umama esizayo kwenzekani ngalowo sokukhulelwa zingayeka. Nokho, izingane eziningi namanje zizalwa ngaphandle kwezinkinga.
Ngemuva kokuthola ukuthi ukuthi maduze uba umama, kufanele uvakashele udokotela wezifo zabesifazane. Udokotela kusukela lapha kuqhubeke kuyoba eduze ukuqapha isimo sakho. Abesifazane abaningi banesithakazelo, okuyinto usuku kubhekwa lo sokukhulelwa yobudala gynecologists. Phendula ngokushesha yalo mbuzo akunakwenzeka njalo. Ikakhulu kunqunywa izici ngazinye akhulelwe zomama. Lesi sihloko uyokwethula inkulumo nawe ukuba Ezimweni ezimbalwa siphenywa, echaza usuku odokotela cabanga sokukhulelwa.
yobudala sokukhulelwa lapho nje ebamba isisu
Ngaphambi ukuthola okuyinto usuku kubhekwa ukukhulelwa, odokotela kudingeka bachazele izingane zabo ukuba yena isimiso sokukhulelwa. umzimba Female sibhekana nezinguquko eyindilinga ngesikhathi engu zokuzala. Ngenyanga eyodwa, emzimbeni wobulili bubuhle isifika eziningi izinqubo. Okokuqala, indlala pituitary ikhiqiza i-estrogen hormone. Ngosizo lwawo sikhule follicle e ezikhiqiza amaqanda. Azungeze phakathi umjikelezo kunqunywa evelele. Kuyinto ngenxa yayo futhi kamuva kudedelwa amaqanda.
Nge-ovulation - lena mzuzu lapho gamete zesifazane isifinyelele umkhawulo ka ukukhula nokwakheka kwalo (the follicle evelele). Iqalisa le hormone inqubo luteinizing. Ngemva kwalokho, progesterone ukujama, oveza lo luteum Corpus. Ngaphansi wesenzo kwenzeka endometrial Ukwakha-up kanye nokulungisa kwesibeletho ukuthi abakhulelwe yini. Kokukhulelwa kwenzeka amashubhu fallopian. Kusuka lapho amaseli ngokuqhubekayo sokuhlukanisa ukuwela umgodi we umthondo, ezoqinisekisa ukuthuthuka ukukhulelwa. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi yonke into silula, futhi umbuzo okuyinto usuku kubhekwa ukukhulelwa akufanele kwenzeke. Nokho, odokotela babe iphuzu kuyiwa umbono phila siqu ekuphileni count yakho. Cabangela izibonelo ezimbalwa ngabanye.
Isilinganiso umjikelezo besifazane kanye sibalo isikhathi yokukhulelwa
Kusukela lokho usuku ubale Emasontweni onke okukhulelwa, uma umjikelezo isikhathi wowesifazane izinsuku 26-29? Okokuqala, ake sithi ukuthi ngenhla obuphelele isilinganiso nkathi abesifazane kakhulu. Uma befika yokwamukela kuya wezifo zabesifazane, udokotela uqala ukulandisa kwakhe. Kulokhu, lo ngosuku kusukela usuku lokuqala lapho ukopha uqalise. Kungani-ke izibalo ezifana senziwa?
Le ndlela yokufaka libizwa sokukhulelwa azoya. Umsuka kuthatha e ngosuku lokuqala zinyanga esikhathini. Nokho, ngalesi sikhathi yokukhulelwa angazanga ngisho umzimba female. Kuyaphawuleka ukuthi ukuzalwa eside azoya ihlala amasonto 40 noma njengoba kukhonjisiwe kweminye imithombo, izinsuku 280. Amaviki amabili ezandulela nge-ovulation, kungenziwa sisuswe lesi sikhathi. Kulokhu, isikhathi sokukhulelwa kuyoba ngamasonto 38.
umjikelezo iDemo kanye nezici zayo
Kusukela lokho usuku gynecologists bakholwe kwabakhulelwe abesifazane nge umjikelezo emfushane? odokotela abanolwazi oludingekayo acabangele uyini kuphele isikhathi. Uma lokhu kungenjalo ucatshangelwe, ukubala Kungenzeka yini ngempela olunembile. umjikelezo iDemo ihlala izinsuku mayelana 21 noma 3 amaviki. Uma uqala kusukela ngosuku lokuqala lokugcina esikhathini, kuvela ukuthi iviki elilodwa akwanele. Ngakho, abesifazane kaningi umjikelezo iDemo musa sifinyelele isikhathi esibekiwe. Ukubeletha abakazi uma sebehlanganisa amasonto angu-40, futhi engu-39.
Uma udokotela wezifo zabesifazane ngeke icabange engavamile ukuthi umjikelezo yowesifazane esifushane, ungenza ukubala efanele usuku kulindeleke kwezidingo. Ukuze wenze lokhu, vele ungeze letingekho ngesonto esengeziwe isikhathi Imininingwane esesibelethweni. Kulokhu, kungashiwo baphetha ngokuthi elithi yokukhulelwa (azoya) kuhlehlela emuva ngisho phambi zokugcina esikhathini (umjikelezo odlule).
Njengoba gynecologists ibalwa kwabakhulelwe umjikelezo eside,
Nge eyodwa ngosuku ongacabanga ngayo ekuqaleni kokukhulelwa, uma isikhathi kwesikhathi labesifazane iwukuba izinsuku ezingaphezu kwezingu-30? On umjikelezo eside kangakanani lapho omunye menses ukuba omunye senzeka mayelana 35 days. Kule singaphetha ngokuthi le nkathi ihlala amasonto amahlanu. Indlela odokotela ukwenza ukubala ezimweni ezinjalo?
I eside umjikelezo nge-ovulation kwenzeka emhlabeni ngosuku 20 lomjikelezo. Njengoba wazi, kwakhululwa iqanda kusukela esibelethweni ngaphambi kokuzalwa senzeka emasontweni 38. Nokho, odokotela ayaqala ukubala kusukela ngosuku lokuqala lokugcina esikhathini. Yingakho kuvela ukuthi isikhathi sokukhulelwa besifazane nge umjikelezo eside i isilinganiso ngesonto elilodwa ngaphezulu. It kuvela ukuthi nokubeletha yemvelo abazi siqala ngo-40, futhi amasonto 41. Uma udokotela uyayinaka futhi owake wabhekana eyanele, ukubala kulesi simo ngeke kwenziwe nge umjikelezo 7 ngosuku. Lokhu kuyoholela ekuthuleni yokuthi ukuhlukahluka nezinsuku okulindeleke kungagwenywa.
Ngo kokukhulelwa kwesibeletho: umbiko omfitjhani
Nge eyodwa ngosuku ongacabanga ngayo ukukhulelwa nge IVF? Lo mbuzo bonke ubulili bubuhle, okwadingeka ukuba usebenzise inkonzo insemination yokufakelwa. Uma lona wesifazane zokukhwabanisa kuthatha kwama-hormone athile ezinsukwini ebekiwe. Kuyaphawuleka ukuthi lomgomo emfushane azihlukile kakhulu ukugqashula emjikelezweni evamile. Kuleyo ncwadi owesifazane izinsuku ezimbalwa noma ukusebenzisa izidakamizwa ukufukula ukukhula follicle. Ezinsukwini ezimbalwa nje ngaphambi nge-ovulation, basuke isuswe ngalo ingaphakathi we esibelethweni. Esikhathini abavamile umjikelezo kokukhulelwa Kwenziwa kulesigaba Lesiphakeme. Nokho, ngayo yonke inqubo IVF kuyiwa. Emva kokuthola amaqanda, basuke kuhlanganiswe isidoda. izinsuku Landelayo ezimbalwa esengeziwe cell division ababukele ochwepheshe. ukudluliselwa umbungu senzeka ngosuku lwesithathu noma lesihlanu. Kusukela ngalolo suku, futhi kuziwa sokukhulelwa.
Ngosuku gynecologists cabanga ekuqaleni sokukhulelwa? Lapho yokufakelwa isikhathi insemination ibalwa kusukela esikhathini Iqanda ukubuyisa, kodwa nge ukwengeza amasonto amabili. ngokuvamile Umjikelezo iDemo akudingekile ukuba bangasizakali ukubala. Gynecologists bathi ngosuku lokuqala lokugcina esikhathini kungukuqala sokukhulelwa.
Izici olandelwayo eside e kokukhulelwa kwesibeletho
Esikhathini eside ngaphandle kwesibeletho fertilization olandelwayo has izici zayo siqu. Ngakho, ngaphambi ukushukuma futhi follicle ezikhulayo owesifazane enezinwele tekuhambela ukulungiswa ezithile.
Okokuqala, ubulili bubuhle ukuthatha imithi ukuthi uvimbele ezikhiqiza amaqanda. Futhi ambalwa nje amasonto ukuluqala ingqondo. Uma ukubala okhulelwe ngosuku lokuqala lokugcina esikhathini, ubude bayo kulindeleke singemaviki lange 7-8. Nakuba lesi sithombe sangempela kuthanda amasonto 3-4 kuphela. Yingakho gynecologists ziyadingeka acabangele ngosuku umbungu nokuthi iphinde itshalwe uthatha njengelungelo reference iphuzu.
Ngosuku gynecologists cabanga yobudala sokukhulelwa ezimweni ezikhethekile? Ukuze labo zihlanganisa izimo lapho owesifazane akakwazi ukuba usuku ngaphansi kwazo ngenyanga edlule. Lokhu kungaba ngesikhathi ibele, ukuthatha amalungiselelo athile hormone nokunye.
Odokotela bathi ezimweni ezinjalo kubalulekile ukuqhuba ultrasound. Ngesikhathi kusaqalwa kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane kwenza kube kahle impela ukucacisa inombolo Emasontweni onke okukhulelwa.
Njengoba kwenzeka empilweni
Manje uyazi ukuthi ukubala sokukhulelwa ngokuvamile gynecologists futhi obstetricians. Okwamanje thina ngokwethukela ebhekene yokuthi odokotela ikakhulukazi fixated ngenxa ubude esikhathini kanye nge-ovulation usuku kulungiselelwa. Ngokuvamile, odokotela vele ungeze isonto elilodwa ukuba usuku ukopha zokugcina futhi ngalokho kakade isikhathi sokubala.
Isibonelo, uma isikhathi sakho uqale ngoJanuwari 1, umnqamulajuqu kuzoxoxwa kuphela inombolo 7. Odokotela ukuchaza izibalo enjalo kungenzeki esesikhathini sokukhulelwa.
Manje uyazi lapho ngosuku ongacabanga ngayo sokukhulelwa. Ngemva nje ebamba isisu, isikhundla esisha ingatholakala kuphela ngemva kwamasonto amabili. Lokhu uzokutshela ukuhlolwa kokukhulelwa. Nokho, ukuqinisekisa i-sokuthi kwenzekeni kokukhulelwa kungenzeka kuphela ngemva kwamasonto ambalwa, ngesikhathi uphethwe ultrasound. Khanyisa ukhulelwe!
Black sezinyawo ekukhulelweni: izimbangela, imiphumela kanye izici ukuphathwa
Ice Green ngokuba ubuso
Izitshalo zokwenza izinto ze-OJSC Ramensky (Ramenskoye, esifundeni saseMoscow): incazelo, oxhumana nabo